जुलाई 1, 2019 स्पिन महल समाचार र कैसीनो बोनस
क्रेप्स उत्तरमा सबैभन्दा मजेदार क्यासिनो खेलहरू मध्ये एक हो अमेरिका यद्यपि तपाईंले धेरै अन्य स्थानहरूमा खेल्न खोज्नु हुनेछ विश्व भरि, पनि। एकपटक तपाईंले क्रेप्सको आधारभूत नियमहरू हासिल गर्नुभएपछि, तपाइँलाई आफ्नो जीत अधिकतम गर्नको लागि उत्तम तरिका बारे सोच्न सुरु गर्न आवश्यक छ। निस्सन्देह, केही छ कि तपाईं पासाको बारेमा गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले समाप्त पार्नेछन् कि उनीहरूले उनीहरूलाई कसरी लुकाउन सक्छन् - वा कम्तीमा, उनीहरूलाई! यो निश्चित रूप देखि एक रोलिंग शैली विकसित गर्न को लागी कोशिश नहीं गरेर रहेको छ जो तपाईं शूटर हो जब रोल को परिणाम हेरफेर को कोशिश गर्दछ। क्यासिनोले खेलाडीहरूको धेरै म्युजिक दृश्य लगाउँछन् जसले यस तरिकामा काम गर्दछ!
तथापि, तपाईं क्रेप्समा के गर्न सक्नुहुनेछ, तथापि, तपाइँले शर्तको बारेमा व्यावहारिक सोच्नु हो। याद राख्नुहोस् कि घरको एक फायदा छ, जस्तै अन्य लोकप्रिय कैसीनो टेबल गेमहरू। उनले भने, तपाइँ केहि निश्चित रणनीतिहरु को साथ खेल सकते हो जुन यस किनार को कम गर्न को प्रयास गर्नुहोस र यसैले, तपाईंलाई जीतने मा मदद गर्दछ। केही सामान्य सामरिक दृष्टिकोणहरू छन् जुन तपाईंलाई क्रेप्समा बढी सफल हुन मद्दत गर्दछ?
यो एक बेटिंग रणनीति हो जुन संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। यो पनि सबै प्रकारका पैसा शर्तहरूमा काम गर्दछ जबसम्म तपाइँको दाँतमा थप थप को दोहोरो मौका हो। यस्तो रूपमा, तपाइँ यसलाई दुई-घोडा दौडमा राख्नुहुँदैन किनभने यी कहिलेकाहीं कहिलेकाहीं हुन्छन्। तपाईं मा आउन अजीब नम्बर बिट गरेर Martingale रणनीति प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ रूले, उदाहरणका लागि। कर्पको साथ, अर्कोतर्फ, यदि तपाईं पनि पैसा पास शर्तमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो काम गर्दछ। विचार एक अपेक्षाकृत कम दाँत संग शर्त राख्न छ। यदि तपाईं जित्नुभयो भने, अझ धेरै राम्रो। तपाईं या त तपाईं आफ्नो जीत संग टाढा जान सक्नुहुन्छ वा खरिदबाट जारी गर्न सक्नुहुनेछ।
जहाँ मार्टिङ्गले रणनीति खोलिन्छ भने तपाईले हराउनु हुन्छ। यदि यो मामला हो भने, त्यसपछि तपाइँ अर्को पछाडि पनि समान बनाउनुहुन्छ, पैसा पनि शर्त। तथापि, एउटै दावी दावी गर्नुको सट्टा, तपाइँ यसलाई दोहोर्याउनुहुन्छ। पहिले नै दुई पटक पटक्कै गरेर, यदि तपाईंले जित्नुभयो, त्यसपछि तपाइँ आफ्नो पहिला हानि हटाउनुहुनेछ। विचार यो छ कि तपाईंले अन्ततः यो प्रतियोगितामा शर्त जारी राख्नुभएन जबसम्म तपाईले जित्नु भयो। निस्सन्देह, यो रणनीतिले घर फायदामा लिने छैन, तथापि कि यो क्रेप्समा अपेक्षाकृत कम छ। मार्टिङ्गेल दृष्टिकोणको साथ अर्को समस्या भनेको छ कि तपाईं दुबै दुबारा राख्न र दोहोरी राख्न पर्याप्त धनराशि हुनु पर्छ। तपाईंले सम्भावित यो विधिको साथ ठूलो गुमाउन सक्नुहुनेछ। यद्यपि, यो सजिलो छ र यो ठूलो प्लस बिन्दु हो!
रिवर्स मार्टिङ्गेल रणनीति
तपाईले यसको नाम बाट आशा गर्न सक्नुहुनेछ, रिवर्स मार्टिङ्गेल रणनीति एक सामरिक दृष्टिकोण हो जसले मार्टिङ्गेल बाट राउन्डको विपरीत मार्ग गर्दछ। यस गुणाअन्तर्गत, तपाईंले आफ्नो गुणा बढाउनु भयो जब तपाइँ हराउनुहुन्छ र यसलाई घटाउनुहोस्। विचार यो हो कि लिक खोने देखि प्राप्त तपाईंको घाटे यस दृष्टिकोण संग कम से कम हो जान्छ ताकि तपाईं लामो समय सम्म पनि पैसा दांव संग क्रेप्स को खेल जारी राखन को लागि सक्षम हुनु पर्छ यदि तपाईं खराब जादू मा पीडित हो। अर्कोतर्फ, जब तपाईं जित्नुहुन्छ, तपाईले तपाइँको दावी वृद्धि गरेर तपाइँको क्षमतालाई अधिकतम गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईसँग रिवर्स मार्टिङ्गेल रणनीतिको साथमा दुई अर्बको हिस्सेदारी छैन तर यो गर्ने मानक उपाय हो।
रिवर्स मार्टिङ्गेल रणनीति को बारे मा एक उल्लेखनीय बिंदु यो कि जुआ गिरोह को घटना को रूप मा जानिन्छ केहि मा निर्भर गर्दछ। यो एक अवधारणा हो कि धेरै जुआहरु को पालन गर्दछ जसलाई उनि जीत र घाटे को रेखाहरु मा बेल्ट को बारे मा सोचते हो। बेशक, जब पनि एक पैसा घटना अनियमित रूपमा आयोजित गरिन्छ, जस्तै सिक्का फ्लिप, एक परिणाम र अर्को बीच कुनै जडान छैन। जस्तै, यो रणनीतिले खेलाडीको मनोविज्ञानमा चिसो भन्दा बढी आधारित हुन्छ, गणनात्मक सांख्यिकीय प्रमाणहरू।
कुनै गृह लाभ 'बाधा शर्त' रणनीति
लगभग सबै कैसीनो खेलहरूको विपरीत, तपाईं क्रेप्सहरूमा एक शर्त बनाउन सक्नुहुन्छ जुन घरको किनारा छैन। यसले तपाइँलाई एक पास बनाउने वा सुरुमा शर्त आउँदा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंले गर्नुभयो भने, त्यसपछि एक बिन्दु पछि फ्याँकिएको छ, तपाईं बाधाहरूमा शर्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईंको प्रारम्भिक शर्त गुणा गर्ने विकल्प रहेको छ। विभिन्न घर नियमहरू तपाइँ खेलिरहेका छन् आधारमा तपाइँले यो दाबी गुणा गर्न सक्नुहुनेछ को लागी आवेदन गर्दछ। यद्यपि, धेरै क्यासिनोहरूमा सामान्य छ र अनलाइन खेलहरूसँग तपाइँलाई तपाइँको पहिलो कल्याण डबल वा तिब्र गर्न अनुमति दिनको लागि। यो शर्त गरेर, तपाइँ भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्छ कि बिस्तार एक पटक घातक सातको साथ आउछ भन्दा पहिले रोल गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण कुराले, खेलाडीहरू पनि बाधाहरू लिन सक्छन् र उनीहरूको दाँत गुमाउन सक्छन् 'आउँदैन' र 'पास नगर्नुहोस्' विजेताहरू।
यस बेल्टिंग रणनीति को सिद्धान्त यो हो कि यो सचमुच वास्तविक बाधाहरु लाई भुगतान गर्दछ। त्यहाँ कुनै घर फायदा बनाइएको छैन त्यसैले सीधा जित्ने विजेता शर्तसँग सम्बन्धित विजेताको मौका बाहिर हुनेछ। दिइएको छ कि क्रेप्सको साथमा घरको फायदा पनि कम छ, केहि खेलाडीहरूले यस प्रकारको रणनीतिलाई अनदेखी गर्न छनौट गरे। यद्यपि, सबै क्यासिनो खेलहरूमा सबैभन्दा फायदेमंद दाताहरूमध्ये एउटा छुटेको हो। यदि तपाईं त्यसो गर्न खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने, आफ्नो दाँतलाई बाधाको साथमा अधिकतम गर्नुहोस् जब यो प्रकारको दावी गर्ने मौका माथि आउँछ।
यस खेलको सिंहासनको माल्ट व्हिस्की संग्रह
2019 भ्रमण गर्न पाँच सस्ता युरोपियन क्यापिटलहरू
जब स्लटहरूमा नगद आउट हुन्छ
स्मार्ट प्ले गर्नुहोस्: तपाईको क्यासिनो तथ्यहरू सिक्नुहोस्
स्टक दलालहरू: जुवाको सूट?
2019 सूत्र एकमा कसले विजय लिनेछ?
क्रेप्स रणनीतिहरु र कसरि विन अपडेट गरिएको: जुलाई 1, 2019 लेखक: Damon
0.1 मार्टिङले रणनीति
0.2 रिवर्स मार्टिङ्गेल रणनीति
0.3 कुनै गृह लाभ 'बाधा शर्त' रणनीति
1.1.0.1 यस खेलको सिंहासनको माल्ट व्हिस्की संग्रह
1.1.0.2 2019 भ्रमण गर्न पाँच सस्ता युरोपियन क्यापिटलहरू
1.1.0.3 जब स्लटहरूमा नगद आउट हुन्छ
1.1.0.4 स्मार्ट प्ले गर्नुहोस्: तपाईको क्यासिनो तथ्यहरू सिक्नुहोस्
1.1.0.5 क्यासिनो क्लासिक्स तपाईले कहिल्यै सुनेको छैन ...
1.1.0.6 महत्त्वपूर्ण रूले सर्तहरू
1.1.0.7 स्टक दलालहरू: जुवाको सूट?
1.1.0.8 कैसीनो खेलहरू ग्रीन ग्रीन किन छन्?
1.1.0.9 किन डिजिटल सहायकहरू सधैं महिला छन्?
1.1.0.10 2019 सूत्र एकमा कसले विजय लिनेछ?
क्रेप्स रणनीति र कसरी ...